के महामारीमा होटलमा बस्नु सुरक्षित हुन्छ ? - muktikhabar
मुक्तिखबर	काठमाण्डाैं	कात्तिक २१, २०७७
कोरोनाभाइरसको महामारी चलिरहेका बेला होटलमा बस्नु सुरक्षित होला की नहोला ? अहिले धेरै मानिसलाई यो प्रश्नले सताइ रहेको पाइन्छ । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा निवारण केन्द्रले यस बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्दै स्पष्ट पारेको छ । उसका अनुसार कोरोनासँग सुरक्षित रहनका लागि होटलमा बस्नु भन्दा घरमा बस्नु नै सुरक्षित हुनेछ ।
२१ कात्तिक २०७७, शुक्रवार १२:५२ बजे प्रकाशित